एभरेष्ट चढ्ने १३ वर्षीय बालिकाको साहसिक कथा- चलचित्र पूर्णा - Everest Dainik - News from Nepal
एभरेष्ट चढ्ने १३ वर्षीय बालिकाको साहसिक कथा- चलचित्र पूर्णा
वलिउडमा बन्ने मसाला चलचित्रको भीडमा केही चलचित्रहरु उत्प्रेरणाले भरिएका हुन्छन् । यस्तै एउटा चलचित्र हो– पूर्णा ।
१३ वर्षीया आदिवासी बालिकाको मुख्य भूमिका रहेको चलचित्रमा जीवनको संघर्षका कतिपय पाटाहरु केलाइएको छ ।
अप्ठ्यारा र चुनौती आउँछन तर तिनीहरुसँग साहस बोकर जुध्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिन्छ चलचित्रले । चलचित्रमा अन्य आम चलचित्र जस्तो सस्पेन्स देखिन्न । तर पूर्णा चलचित्र जसरी बनेको छ, यो निर्देशक, लेखक र अन्य टीमका लागि निकै चुनौतीपूर्ण रहेको हुनुपर्छ भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
याे पनि पढ्नुस सगरमाथालाई प्रदूषित नबनाउन प्रधानमन्त्रीको आग्रह
चलचित्रमा अदिती इनामदारले एकजना मायालाग्दो बालिकाको भूमिका निर्वाह गरेकी छिन् । राहुल बोसले निर्देशन गरेको चलचित्रमा अदितीको अभिनय बेजोड देखिन्छ । अदितीकी बहिनी बनेकी छन् एस. मारिया । उनको अभिनय पनि प्रशंसायोग्य छ । चलचित्रमा निर्देशक राहुल बोसले समेत मेन्टरको भूमिका निभाएका छन् । यो सँगै धृतिमान चटर्जी, हीबा शाह र ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी सपोर्ट भूमिका देखिन्छन ।
याे पनि पढ्नुस गणतन्त्र र सगरमाथा दिवस गुगलको विशेष डुडलमा
चलचित्रमा गति कतै छिन्नभिन्न भएको देखिन्न । शुरुदेखि अन्त्यसम्म चलचित्र एउटा प्रवाहमा बगेको छ । कतै कतै अंग्रेजी र तेलगु भाषाको प्रयोग छ । त्यसको सबटाइटल देखिन्न । तर पनि यसले खासै फरक पार्दैन । चलचित्रको गति बेजोड भएकोले दर्शकहरु कथा र पात्रसँगै जोडिन्छन् ।
याे पनि पढ्नुस सगरमाथा आरोहण प्रतिबन्धको हल्ला निराधार
चलचित्रमा कला पक्षलाई निकै महत्व दिइएको छ । तथाकथित भडकिलो सेटहरु देखिन्न । चलचित्रको प्रिमियर भारतको राष्ट्रपति भवनमा समेत राखिएको थियो ।
ट्याग्स: Mt. Everest, Poorna review